Ururka Caafimaadka Adduunku OMS/WHO oo kor u kaca virus ka Zika ku qiyaasay 4 malyuun oo xaaladadood 12ka bilood ee soo socda - Horn Future
Ururka Caafimaadka Adduunku OMS/WHO oo kor u kaca virus ka Zika ku qiyaasay 4 malyuun oo xaaladadood 12ka bilood ee soo socda
Geneva-Ururka Caafimaadka Adduunku OMS/WHO ayaa waxa la kulmi doona gudiga xaaladaha deg dega ah ee Geneva jawaabta caalamku uu ka bixiyay virus Zika ee ka dillaacay Isniintii 1 February,kaasoo lagu qiyaasay in uu kor u kacayo 4 malyuun oo xaaladadood dalalka America 12ka bilood ee soo socda.
Sanadkii la soo dhaafay ayaa virus kan laga ogaaday dalalka America, halkaas oo imika uu ugu faafayo sidii duufaantii oo kale.
Milaygan aan joogno 23 dal iyo dhulal ku yaala goboladan ayaa laga soo sheegay xaalado iyada oo heerka digniintuna aad u sarayso, sidaa waxa sheegtay” Margaret Chan Agaasimaha Guud ee WHO mar ay ka hadashay shir lagaga hadlayay virus Zika oo ka dhacay xarunta WHO.
Sylvain Aldighieri oo madax ka ah kooxda WHO ee ka jawaabida faafida cudurada ee America ayaa ku qiyaastay in ay jiri karto 3 ilaa 4 malyuun oo xaaladood oo virus ka Zika ee America 12 bilood ee soo socda,sida ay warbaahinta u sheegtay.
Virus Zika ayaa la rumeysan yahay in dhawaanta uu sababay cudurka loo yaqaano (microcephaly ) kaasoo dhibaato u keena koritaanka dareemayaasha jidha, waxana kamid ah cillado dhalasho oo madaxa ilmaha dhalanaya uu ka yar yahay inta caadiga iyo maskaxda dhallaanka oo aanan si caadi ah u korin.
Heerka walaac laga qabo waa mid aad u sareeya, sida isaga oo aanan la hubin heerka uu yahay,kuwani waa su’aalaha noogu badan,waxa aan u baahanahay in aan u helo jawaabahan qaar ka mid ah si dhaqso ah,sidaa waxa ka digtay” Chan.
Waxa aan go’aansaday in aan isku gu yeedho guddiga deg dega ah ee hoos yimaada maamulka caafimaadka caalamiga ah. Guddigu waxa uu ku kulmi doonaa magaalada Geneva Isniinta, 1 February,” ayay tidhi Chan.
Wakhtigan aan joogno ma jiro tallaal ama wax lagu daweeyo virus kan, kaas oo ku fiday 24 dal iyo dhulal badan oo ku yaala America.
Waxa aan ka codsanayaa Guddiga talo ku saabsan heerka ku haboon walaaca caalamiga ah iyo tallaabooyinka lagula talinayo in ay tahay in laga fuliyo dalalka ay dhibaatadu saameysey iyo meelo kale,sidaa waxa tidhi masuulkan.
Sidoo kale waxa aan weydiisan doonaa Guddiga in ay mudnaanta siiyaan meelaha cilmi-baadhista sida deg dega ah loogu baahan yahay,” ayay ku dartay.
Dalalkan virus ka Zika uu ka dilaacay ayaa waxa ay muwaadiniintooda uga digeen gaar ahaan haweenka in ay iska ilaaliyaan uur qaadida mudo 2 sano ah si ay uga baadiyaan caruurtooda in uu haleelo virus ka Zika oo ilmaha noloshiisa dambe raad aad u wayn ku yeesha.
« Yemeniyiin ka dhigtay godadka buuraha gabaad kadib markii ay ka firxadeen dagaalada ka socda deegaanadooda	» Ururka haweenka USN oo kulan ku yeeshay xarunta ay ku leeyihiin xaafada cité Progrès,tacsi tiiraanyo leh na u diray xigtadii dadkii Geelle xasuuqay